Aretina tsy mamela mahazo :: Misedra aretin’ny voa sy afero sahady ity zaza vao efa-bolana • AoRaha
Aretina tsy mamela mahazo Misedra aretin’ny voa sy afero sahady ity zaza vao efa-bolana
Zazavavikely vao efa-bolana monja Rakotovao Anjarasoa Nekena na I Nekena. Tratran’ny aretin’ny voa sy ny afero izy ka manaraka fitsaboana etsy amin’ny hôpitalin’ny zaza, etsy tsaralalana amin’izao fotoana izao. Miharatsy ny toe-pahasalamany satria sady sempotra no miadana ny fitempon’ny fony. Ny ray aman-dreniny lany vola kanefa ny vidim-panafody hoentina mitsabo azy, midangana tokoa.
Aretina tsy fahita firy amin’ny zaza no mahazo an-dRakotovao Anjarasoa Nekena, izay manitsaka ny fahaefa-bolany ankehitriny. Vao teraka izy dia efa nahitana tsy fahatomombanana ny aferony satria somary kely izany raha oharina amin’ny aferon-jaza amin’ny ankapobeny. Niteraka fikorontanana teo amin’ny fiasan’ny taova ao anatiny izany ary nitarika fahasimbana eo amin’ny voany koa. Miharatsy ny toe-pahasalaman’i Nekena.
Efa lany volabe ireo ray aman-dreniny tamin’ny fitsaboana azy, hatramin’izay nampaharary azy. Mila tsy haharaka intsony ny hoenti-mitsabo azy ka manao antso vonjy amin’ireo malala-tanana mba hanavotana ny ain’ity zaza vao efa-bolana nahitana masoandro ity.
Tapa-bolana mahery izao no nitsabo ny zanany vavikely etsy amin’ny hôpitalin’ny zaza, etsy Tsaralalana i Paul René sy Raharivololona Marie Claudine, ray aman-drenin’i Nekena. Miha ratsy ny fahasalaman’ity zazakely ity ary mila fitsaboana haingana dia haingana izy mba hialana amin’ ny fandidiana, araka ny nohazavain’ny dokotera Bemasy, mpitsabo sy mpanara-maso azy ao amin’ny hôpitalin’ny zaza, etsy Tsaralalàna. “Mbola azo sitranina amin’ny alalan’ny fanafody aloha izy satria mbola eo am-panombohana ny aretiny. Tsy tokony hiandry ela anefa ny fianakavian’i Nekena satria miha marefo andro aman’alina ny toe-batany. Sempotra be izy, miha miadana koa ny fitempon’ny fony sady mitombo hatrany ny fibontsinan’ny kibony.
Hanimba ny taova ao anatiny izany raha tsy voatsabo haingana”, hoy hatrany ity mpitsabo, mitondra fanazavana.
Mahaontsa fo ny mijery an’ity zazakely ity. Tsy afaka misakafo mivantana izy noho ireo fantsona kely maro be napetraka amin’ny vatany sy eo amin’ny orony. Amin’ny alalan’ireo fantsona kely ireo no hanomezana sakafo azy. Aiditra mivantana any anatiny ny ronono tokony homena azy avy eo amin’ny vatany.
An’hetsiny maro isan’andro no mivoaka ny kitapom-bolan’ireo ray aman-drenin’i Nekena. Fanafody maro karazana hoentina hitsaboana ny voa no tsy maintsy vidiana sy homena azy. Midangana avokoa anefa ny vidin’ireo fanafody ireo, araka ny fanazavan-dreniny, Raharivololona Marie Claudine. Nanome ohatra tamin’ny vidim-panafody tsy maintsy vidiana ilaina ny maman’i Nekena. Nolazainy ohatra fa “eninjato sy efatra arivo sy telo alina ariary ny saran’ny Flagyl 125 mg; efatra alina ariary ny vidin’ny Oroken 100 mg; zato sy iray alina ariary ny vidin’ny Ursolvan iray boaty”.
“Lany haiky tanteraka izahay sady lany vola ihany koa. Lafo be ny vidim-panafody kanefa tsy maintsy ilaina izany. Manginy fotsiny ny vola lany aloa any amin’ny hôpitaly sy ny vola hividianana sakafo sy kojakoja rehetra ilaina aty am-piandrasana azy. Efa mifanampy amin’ny havana izahay saingy tsy mbola maharaka ny vola eto am-pelantanana”, hoy hatrany izy.
Antso vonjy an-dranomaso
Zanaka voalohany ho an’i Paul René sy Raharivololona Marie Claudine ity zazavavikely efa-bolana ity.
An-dranomaso no nilazan’izy ireo fa mila vonjy amin’ ireo olon-drehetra malala-tanana ry zareo satria maniry ny hanana zanaka salama tsara. “Miantso vonjy sy miangavy anareo rehetra tsara sitra-po izahay mba hanampy anay. Raisinay an-tanandroa avokoa izay foinareo homena ho anay na vola izany, na sakafo, na fitaovana. Isaorana ireo efa nanampy anay ary hisaorana sahady koa ireo mbola hanome tan-tsoroka”, hoy hatrany ny reniny.
Azon’ny olon-drehetra te hanampy azy telo mianaka ireto atao ny manatitra ny fanomezana mivantana eny amin’ny hôpitalin-jaza, eny Tsaralalàna. Ao amin’ny efitrano REA 3 no misy azy ireo. Ankoatra izay dia manana laharan-tariby misy Mvola, Orange Money, ary Airtel Money ny ray aman-drenin’i Nekena ho an’izay tsy afaka manatitra ny fanampiana mivantana eny amin’ny hôpitaly.
Manana kaonty any amin’ny banky ihany koa izy ireo. Ireto ny laharan’ny finday hahafahana mandefa ny vola fanampiana: 033 20 292 74 ho an’ny kaonty Airtel Money izay misoratra amin’ny anaran-dRaharivololona Marie Claudine, renin’i Nekena. 032 52 533 72 (Orange Money), sy 034 17 362 71 (Mvola), ny laharana finday misoratra amin’ i Paul René, dadan’i Nekena. Ity kosa ny anarana amin’ny kaonty Western Union: Raharivololona Marie Claudine,
mitondra ny laharana 101 982 068 393.
Rugby vehivavy- Afrika :: Tafita hiatrika ny lalao sakana amin’ny Lalao Olympika ny Makis
Fiarahana miombon’antoka :: Hamerina hijery ny fifanarahana amin’ireo mpamatsy azy ny Jirama